ဒီပဲယင်း တရားခံ စက်မှု(၁) ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ စံအိမ်တော်အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း.... ~ ဒီမိုဝေယံ
ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ နေထိုင်နေရတာကတော့.... ဦးအောင်သောင်းအိမ် အုတ်တံတိုင်းမှာ ကပ်ထားတဲ့ ကျောက်ပြားတစ်ချပ်ဖိုးလောက်တောင် တန်ဖိုးမရှိတဲ့ အိမ်ရယ်လို့ အမည်နာမသာရှိတဲ့ နေရာမှာ နေနေရတာပါ.....
အာဏာရှင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခရီး...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ချွေးမနှင့်မြေးတစု တောင်...
အင်းစိန်ထောင်မှ အကျင့်ပျက် ထောင်မှုးများ....
၈၈၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးအတွင်း အာဏာရူးတွေ လက်ချက်...
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပတ်ဝေ့ချွန်း...
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာပြည်ရေ...
ဆရာဟိန်းလတ်ပြုစုတဲ့ (ကင်ဂျုံအီ (သို့) မြောက်ကိုရီး...
အာဇာနည်သား (၂)ဦး၏ မိခင်ကြီးအမေစု၏ ရင်တွင်းစကားနှင...
အာဏာရှင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ...
အာဏာရှင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒုတိ...
Made in Foreign နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရေ...
(မောင်ဝံသ) ပြောချင်လွန်းလို့ ...
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ ဆင်းရဲသားနှင့်သူဌေး ဘယ်သ...
ကျော်သူ့ ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်နိုင်ပြီဟေ့ . . . ။
သံဃနာယက အဖွဲ့အား မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့တပ်ေ...
အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် AGMP ကဗျာဆရာများ သစ်ပင်စိုက...
(၆၃) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်.ကျောင်းပေါင...
ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲစာအုပ်နှင့် Freedom From Fear စာအုပ်...
ယနေ့စစ်အာဏာရှင်တွေ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ (၆၃)နှစ်မြောက်...
ယနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ဒု)ဥက္ကဋ္ဌဘဘဦးတင...
Popular Journal ထူးဆန်းထွေလာ ဖားနှစ်ကောင်သတင်းနဲ့ ...
ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား သွား...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ စည်းရုံးရေးစွမ်းရည်....
The Voice ဂျာနယ်...(6-35)
“ သုခ နားနေဆောင် ဖွင့်ပြီ ”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံခြားရေးရာလက်ထောက် ဗိုလ်...
ကိုဇာဂနာရဲ့ ဖခင် ဦးအောင်သိန်း(ခေါ်) ကဗျာဆရာကြီး န...
၁၉၉၀ အာဇာနည်နေ့တိုက်ပွဲနဲ့ “တော်လှန်ရဲသူ အောင်ပွဲ...
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်၏) လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ
ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် တကယ်ကို ထုတ်ဝေခွင့်မရ...
The Voice ဂျာနယ်... (6-34)
ပေးဆပ်သူတို့၏ အောင်ပွဲ နှင့်မျိုးဆက်သစ်တို့၏ အမှန်...
ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးတွေ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ခွင့် ပြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အထိမ်းအမ...
တစ်မျိုးသားလုံး လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲ....
ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာအလုပ်သမား ဝန်ကြီးဋ္ဌာနသို့ (ဒု)ဗ...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ 7th JULY ပေးဆပ်မှုများ.....
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ စစ်အခွန်ရုံးရှေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တ...
ပေါ် ပြူလာဂျာနယ်ကတော့ယနေ့မှစ၍ထုတ်ဝေမှုရပ်ဆိုင်းခံရ, ...
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တိုင်းရင်းသား ၁၃၅မျိုး..
မြေနိမ့်ရာကိုလှံနဲ့စိုက်၊ ကြောက်ပါတယ် ဆိုသူကိုကြို...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ မိန့်ခွန်းများ စုစည်းတင်ဆက်...
တိုကျိုမှာ ကျင်းပတဲ့ မိဘမဲ့ကလေးများ ရံပုံငွေ ဂီတဖေ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ "တိုင်းပြည်ကို တပတ်ရိုက်ပြီး...
နအဖရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြစို့....
The Voice ဂျာနယ်...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သံဃာတော်များထံ လျှောက်ထားချက်...
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးက ဆင်ဖြူတော်ကို ကိုးကွယ်သတဲ့လား.....
ခမောက်တံဆိပ် ဆင်တူယိုးမှား ပြုသည့်ကိစ္စ အဖွဲ့ချုပ်မ...
သာသနာ့ဦးသျှောင် ဂျပန်ဋ္ဌာနခွဲ ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်...
ဂျပန်နိုင်ငံ နာဂိုယာတက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ ပန...
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီ...